Le softhiwe ivinjiwe ngenxa unswinyo Ukrainian ngokumelene Russian Federation.
Dr.Web CureIt – an isithwebuli unqulo wesi arab kuphela ukuthola nokususa izinto enonya. Isofthiwe kusekelwe Dr.Web war core kanye uphulukisa computer ngaphandle ukufakwa unqulo wesi arab. Dr.Web CureIt kwenza ukususa izibungu, ifayela amagciwane, trojans, spyware, njll software njalo olusha ukuqinisekisa isimo samanje unqulo wesi arab yolwazi. Dr.Web CureIt ivumela ukuba afeze scan esheshayo, egcwele noma inkambiso of computer yakho.
Ukuthola kanye nokususwa izinto ezinonya
Izibuyekezo ezenziwa njalo unqulo wesi arab yolwazi
Ikhono afeze esheshayo, scan full noma inkambiso
Dr.Web CureIt Ahlobene software:
Eset 10.1.219.1 Internet Securit, NOD32 Antivirus futhi Smart Security Premium
Antiviruses System nokwenza
Isofthiwe ukuthola sokuqeda inqubo yokusebenza kwe-malware, ukuthi kukhinyabeza ukuhlinzwa okuphelele unqulo wesi arab main.
Ithuluzi eliphumelelayo ukuthola nokususa izinhloso ezinonya ngokusebenzisa ukuhlaziywa zokuziphatha kanye nobuchwepheshe ifu.
Ithuluzi ukusebenza ukuthola nokususa amagciwane. Isofthiwe zivikela izinsongo ahlukahlukene futhi ikuvumela ukuba ivimbe i ukufinyelela abadala website.
SUPERAntiSpyware 6.0.1250 Free Edition futhi Professional
Ithuluzi ukuvikela ikhompyutha yakho ngokumelene izinsongo ehlukahlukene. Isofthiwe kwenza ukubona izinhlobo ezahlukene amagciwane kanye bathole amafayela onegciwane sodwa.
Avira AntiVir 15.0.30.29 Antivirus futhi Security Suite
I unqulo wesi arab kuphela popular ziqinisekise ngokumelene izinsongo ahlukahlukene kanye amagciwane. Isofthiwe uyakwazi ukuvimba amarobhothi inethiwekhi futhi ukhawule ukufinyelela amawebhusayithi abadala.
Isofthiwe yakhelwe ubuyisele uhlelo ku ngokuchofoza izinkinobho ezimbalwa ngaphandle kokusebenzisa abezindaba oqalisekayo.
Adobe Flash Player 27.0.0.170 Opera, Chromium, Internet Explorer futhi Firefox
Isofthiwe cindezela, ukuguqula futhi ukhiphe yokugcina nezinhlobo ezahlukene kanye osayizi. Isofthiwe ine isethi amathuluzi for ukusebenza ngempumelelo kwe-archives.
Imeyili iklayenti Enamandla futhi elula ukusebenza nge-akhawunti amaningi. Isofthiwe ikuvumela ukuba basebenze nge ezihlukahlukene-intanethi kanye nezicelo.
Isofthiwe yakhelwe ukuhlola computer onegciwane izinhloso ezinonya noma eyingozi neutralization kamuva.
CCleaner 5.35.6210 Standard, Professional futhi Portable